အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ နေထိုင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)မျိုး - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
အမြဲတမ်းတဖက်သားကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်ပေး ဆက်ဆံပေးဖို့ ဆိုတာ လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက် (၁၀)ချက်အတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းနေထိုင်သင့်ပါတယ်။
၁။ မိမိကိုယ်ကို ချစ်ပါ
အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ပထမဆုံး မိမိအသားအရောင်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့် နောက်ခံ မိသားစုမျိုးရိုး၊ ကိုယ့်အသားအရောင်၊ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံး၊ ဆံပင်၊ မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ် အမည်းစက်တွေ၊ ကိုယ့်ရင်သားစတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လက်ခံဖို့နဲ့ မိမိကိုယ်ကို ချစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်ခြင်းကို ပထမဆုံးသတ်တဲ့ လက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ကိုယ့်ဘော်ဒီ အစိတ်အပိုင်းတွေကြည့်ပြီး မပျော်မရွှင် လက်မခံခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု လျော့နည်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်အောင် မနေတတ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မလေးစားခြင်းစတဲ့ အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့စိတ်တွေ ဝင်လာဖို့ တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်စေပါတယ်။ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ လက်မခံဘူးဆိုရင် စိတ်သဘောထားသေးပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့ ဝေးဝေးလံလံရှောင်ကြဉ်ချင်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဟာ အပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်အခြားဘက်မှာ အရည်အချင်းရှိပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သူတစ်ဦးအဖြစ် သက်သေပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ၊ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သူတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းဖော်ပြီး ကိုယ့်ကို အကောင်းမမြင်
တဲ့ သူတွေနဲ့ ခပ်ခွာခွာနေထိုင်သင့်ပါတယ်။
၂။ကိုယ့်ကိုကိုယ် သူများနဲ့ မယှဉ်ပါနဲ့
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရှိအတိုင်းလက်ခံပြီး သူများနဲ့ယှဉ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငါကတော့သူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သူများကိုသွားယှဉ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုး သင်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြက်ခင်းတွေလိုပဲပေါ့ အခြားဘက်ကကြည့်ရင် အရမ်းစိမ်းစိုနေပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင် အဲ့လောက်ကြီးလဲ အရမ်းစိမ်းစိုနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အကယ်၍သင်က အမြဲလိုလို ကိုယ့်မှာမရှိတဲ့အရာကို မျှော်လင့်နမယ်၊ ဆန္ဒရှိနေမယ်၊ ကိုယ့်ရှိတာကို တန်ဖိုးမထား မေ့လျော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘဝမှာတစ်ခုခုလိုအပ်နေသလို စိတ်ပျက်စရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ဘဝကို သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကိုယ့်မျက်နှာ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်၊ သူ့လိုမျိုး ချမ်းသာချင်တယ်၊ သူ့လို မျိုးရိုးကောင်းချင်တယ်၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ကို သူ့အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်စတဲ့အချက်တိုင်းကို လိုက်ယှဉ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပူလောင်ပြီး သူများအပေါ် မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ တဖက်သားအောင်မြင်နေတာကိုကြည့်ပြီး အားကျစိတ်နဲ့ ကြိုးစားတာမျိုးကတော့ မနာလိုဖြစ်တာမျိုးနဲ့ မတူပါဘူး။ဒါကြောင့် သူများနဲ့မယှဉ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေမယ့်ကံအကြောင်းမလှတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ ဒီလိုကြုံတွေ.တဲ့အခါဝမ်းနည်းမယ်၊ စိတ်ပျက်မယ်၊ စိတ်တိုမယ်၊ စတဲ့ ကိုယ့်ကို ပင်ပန်းစေတဲ့ စိတ်မျိုးတွေဝင်မလာစေပဲ အကောင်းဘက်က ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ အခြေအနေဆိုးထဲမှာပဲ တွေးမနေပဲလွှတ်ချသင့်ရင် လွှတ်ချလိုက်ပြီး ရှေ.ကိုခရီးဆက်သင့်ပါတယ်။ အမှားထဲက အတွေ.အကြုံယူပြီး နောက်ဒီလိုအမှားမျိုး ထပ်မလုပ်ဖို့ သင်ခန်းစာရတယ်လို့ သဘောထားပါ။ မကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုတာ ဘဝအတွက် သင်ယူလိုက်ရတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုပါ။ ဘဝကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို ဒီထက်မက ပိုသန်မာအောင် လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ သဘောထားပြီး တွန်းလှန်သင့်ပါတယ်။
၄။ ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ လွှတ်ချလိုက်ပါ
မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို လုံခြုံမှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားခြင်းပါ။ ရှုပ်သွားပြီလား ? စိတ်လုံခြုံမှုကို ခံစားရဖို့ဘဝမှာ သင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အရာတွေ၊ အခြေအနေတွေရှမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ထိန်းချုပ်သင့်တယ်ထင်တဲ့ဟာကို ထိန်းချုပ်နိုင်လို့ ကျေနပ်နေပေမယ့် တဖက်ကတွေးရင် ကိုယ်မလုပ်သင့်ဘူးထင်တဲ့ အရာအချို.ကို (ထိန်းချုပ်ထားမိတဲ့အတွက်) ကိုယ်လက်လွှတ်လိုက်ရတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုယ်ဟာအိန္ဒြေဆယ်ပြီး ခံစားချက်တွေ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို အရမ်းမှီခိုနေမိလို့ပါ။အခြေအနေတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ်တွေးထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်မလာတတ်ပါဘူး။ ကိုယ်မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလျော့ပြီး ကြောက်စိတ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘေးကလူတွေနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တော့ပဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့လည်း ဝေးသထက်ဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကို အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မကျေနပ်တဲ့အခါ စိတ်တိုစိတ်ပျက်မှုကို ခံစားရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဒေါသနဲ့ စိတ်ပျက်မှုကြောင့် ပူလောင်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို မုန်းမိရင်လဲ ထိုနည်းတူပါပဲ။ကိုယ်ပဲ ပူလောင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်စိတ်ခံစားမှုကို နာကျင်အောင်ပဲလုပ်လုပ်၊ အထင်သေးပဲသေးသေး၊ ဘယ်လိုပဲ ခန့်မှန်းပါစေ၊ နောက်ကွယ်မှာ တမျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်ပစေ၊ မတရားပြောချင် ပြော၊ လိမ်ညာပြောချင်ပြော စတာတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်ခြင်းကတော့ ဘာမှ လက်မခံပါနဲ. စိတ်ထဲ အဝင်မခံပဲ နေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ လွယ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ကိုယ့်အပေါ်အမှားလုပ်ခဲ့ရင်တောင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ သည်းခံပါ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်နဲ့ နေတတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကလေးလေးတွေ၊ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ဘာကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတာလဲလို့တွေးမိမှာပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့နဲ့ အတူရှိတဲ့ သူကိုလေးစားသလိုလက်ရှိအချိန်ထဲမှာပဲ နေထိုင်လို့ ပျော်ရွှင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက် ပူပန်ခြင်းကိုလျော့ပြီးအတိတ်ကိုမေ့ထားမယ်ဆိုရင် လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဟာ ပျော်စရာကောင်းနေမှာပါ။မနက်မိုးလင်းကတည်းက တနေကုန် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ပြီး မဖြစ်သေးတာတွေအတွက် သိပ်တွေးလွန်းတာတွေ ရပ်သင့်ပါတယ်။
၇။လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး စေ့စပ်သေချာခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက်လျော့ပါ
အချစ်ရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုတာထက်ပိုတွေး၊ ပိုစိစစ်တတ်ကြပါတယ်။ လိုတာထက်ပိုတွေး ခြင်းဟာ သံသယစိတ်ဖြစ်စေပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်တွေက ရှောင်လွှဲဖို့ဆိုရင် တစ်ခုခုဆို စိတ်ထဲကြိတ်မှိတ်မထားဘဲ သက်ဆိုင်သူနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးမြန်းစကားပြောဖို့လိုပါတယ်။ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေကို လက်ခံပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းလျော့ပါ။
ကိုယ့်အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပူပန်မှုဟာ လူတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့ အများရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအသက်မွေးမှု လုပ်ငန်းနဲ့ ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စီးပွားရေး၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးစသဖြင့် ကြိုတွေးပြီး ပုူပန်တတ်ကြပါတယ်။ စိုးရိမ်နေတာထက်စာရင် လက်တွေ.လုပ်ဆောင်လိုက်တာက ရည်မှန်းထားတာတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်နေလား၊ ဒါဆို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာပဲ ရွေးပြီးစားရမှာပဲ။ ငွေရေးကြေးရေးအတွက်စိုးရိမ်မိနေလား၊ ဒါဆို ကြိုတင်ဖွေရှာ၊ ချွေတာစုဆောင်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ သားသမီးတွေအတွက် စိုးရိမ်မိနေလား၊ ဒါဆိုသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတည့်မတ်လမ်းကြောင်းပေးဖို့နဲ့ တိုက်တွန်းအားပေးခြင်း စတာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက် ပူပန်မှုဟာ အခြားအရာတွေထက် ပိုဆိုးပါတယ်။ ပူပန်ခြင်းကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးသာ ထိခိုက်စေမှာပါ။
၉။ အတ္တနဲ့မာနကို လျော့ချပြီး မှန်ကန်စွာနေထိုင်ပါ
သူတပါးရဲ့ဝေဖန်ထိုးနှက်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အတ္တနဲ့ မာနဟာ လူတိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ်။ တခါတလေ ကိုယ့်အတ္တကပဲ ကိုယ့်ကို သားကောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်ပုံစံအစစ်အမှန်မဟုတ်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက် ထိတွေ.ဆက်ဆံရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု မရှိဘူးလို့ထင်လာတတ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရဖို့ ကိုယ်တိုင်မှန်ကန်စွာနေထိုင်သင့်သလို သူတပါးကိုလည်း မှန်ကန်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။
သဘောထားသေးခြင်းနဲ့ နားလည်မှုမရှိခြင်းဟာ ကိုယ်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးဆိုးပါတယ်။ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ကို မှားတယ်လို့ထင်တာတွေ၊ လက်ခံမပေးတာတွေနဲ့ငြင်းပယ်ခံရတာတွေ စတဲ့ခံစားမှုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ ကိုယ်ထင်သလို ကိုယ်တွေးသလိုမဟုတ်ပဲ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးအထင်တွေနဲ့ တွေ.တဲ့အခါ အလွယ်တကူလက်ခံယုံကြည်ဖို့ခက်ပါလိမ့် မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရင် တဖက်သားအပေါ် ပိုမိုနားလည်ပေးပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အလိုက်သင့် မီးစင်ကြည့်ကရင် သင့်အနေနဲ့ ဘာမှ အကျိုးမယုတ်သွားပါဘူး။ သူများတွေကိုယ့်ကိုလက်ခံဖို့ အပြန်အလှန်အတိုက်အခံလုပ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်ခံပြီး အကောင်းဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင် သင်နေလို့ ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
(huffpost-com မှ Article အား YourFitster Team မှဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်)